Paula Gallego. Kubvunzana nemunyori weIink inotibatanidza | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Paula Gallego's webhusaiti.
Paula Gallego, Pamusoro pekuve munyori, iye mudzidzisi uye philologist uye akatoburitsa mashoma emanoveli nevabudisi vakaita saKiwi, Escarlata uye Planeta. Pakati pemazita ake pane Cristal, murwi weemaradhi, uyo aive wekupedzisira muAteneo de Novela Joven de Sevilla Prize, Maawa gumi nematanhatu muVienna, 3 husiku muOslo, Zuva rechando, Mavhiki manomwe muParis, fema, Dutu remoto. Yekupedzisira ndeye Ingi inotibatanidza, kuti yakaburitsa gore rino. Ini ndinotenda chaizvo nguva yako uye mutsa kune iyi hurukuro kuti akandipa.
Paula Gallego - Bvunzurudzo
BHUKU NEWS: La ingi inotibatanidza ndiyo ngano yako yekupedzisira. Chii chaunotiudza nezvazvo uye iyo pfungwa yakauya sei?
PAULA GALICIAN: Ingi inotibatanidza inoverengeka iyo inotaura nezvetariro, mhuri uye rudo munzira dzayo dzese: rudo kushamwari uye mhuri yatinosarudza, kuzvida uye kuda rusununguko. Nyaya yake yakauya naHasret. Iye ndiye akatanga kuoneka mumusoro mangu, achida kutaura achibuda. Zvino Anik naKael vakauya pamwe navo pamwe nezvimwe zvese. Zvese zvinowirirana pamwe zvakakwana: izvo chaizvo zvakaitika zviitiko, misi, zvishoma zvinoitika ... Iyo nyaya yaive iripo yekuti ndinyore.
PG: Yakanga isiri yekutanga yandakaverenga, asi ndiyo yekutanga yakaita kuti ndipinde zvizere munyika yekuverenga: Ndangariro dzaIdhun. Nyaya dzekutanga dzandakanyora dzaive nyaya pfupi; uye yekutanga rondedzero chaiyo yaive nyaya yekufungidzira yandakazviburitsa pandakanga ndiri 17.
PG: Ndichati Leigh Bardugo, Holly Nhema naSarah Maas.
PG: Judha, ivo Muchinda ane hutsinye. Anotaridzika kwandiri kunge munhu akasimukira kwazvo, anonakidza hunhu, ane chiuru chakasiyana micheto. Pasina kupokana, ndiye mumwe wevangu vandinofarira mavara uye ini ndingafarire kusangana naye.
PG: Ndakaverenga mangwanani uye ndinonyora usiku. Ini ndoda kunyora kana ndapedza zororo remitoro yangu, semubairo.
PG: Nzvimbo yangu yandaifarira kuverenga kuri mumba yekutandarira, pedyo nechitoro changu chemabhuku uye matafura angu ane zvirimwa nemabhuku. Kunyora ndinoda kuva mukati hofisi yangu, neangu makokora akazara nemazano, tafura yangu yakasangana, mabhuku angu ari pasherufu uye kati yekurara padivi pangu.
PG: Rangu randinofarira genre, zvese kuverenga nekunyora, iri fungidziro. Ini ndinonyatsonakidzwa nesainzi fungidziro. Ini ndinofunga iwo ndiwo matatu madiki andinofarira zvakanyanya: nhoroondo yezvakaitika, kufungidzira uye sainzi ngano
PG: Ndiri kupedzisa kuverenga Mambokadzi wechinhu yaHolly Nhema, uye izvozvi ndiri kushanda kupora chikamu chechipiri uye chekupedzisira cheiyo Nhema Sigh; kuenderera kwe Dutu remoto.
AL: Iwe unofunga sei chiitiko chekutsikisa ndechevanyori vazhinji sezvavanoda kutsikisa?
PG: Ndinofunga inyika iyo zvinoda basa rakawanda nesimba, uye zvakare yakawanda mari yerombo. Nekudaro, nekutenda kune vaparidzi vari kubuda, kune mikana yakawanda uye yakawanda yekuburitsa bhuku. Musika wacho wakakura kudarika zvaive makumi mashoma apfuura.
PG: Ini ndinofunga kuti zvese zvatinorarama zvinogona kutibatsira neimwe nzira, asi ini handidi kurerutsa chinhu chakaita kuti vanhu vazhinji vatambure. Kwechinguva, unofanira kuramba, enda kumberi uye utarisire kuti zvese zvichanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Paula Gallego. Kubvunzana nemunyori weIink inotibatanidza
Kutamba kwema tulips